Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo ka hadlay sida uu arko hawlgalka Ciidan ee Kenya ka waddo Soomaaliya | Berberanews.com
Home WARARKA Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo ka hadlay sida uu arko...
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo ka hadlay sida uu arko hawlgalka Ciidan ee Kenya ka waddo Soomaaliya
Addis’ Ababa-(Berberanews)- Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon, ayaa ka hadlay aragtidiisa ku waajahan hawlgallada ay Ciidammada dawladda Kenya ka waddo gudaha dalka Soomaaliya muddo saddex bilood iyo dhawr iyo toban habeen ah.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo ka qeybgalay shirka Urur-goboleedka IGAD uga furmay magaalada Addis’ Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, ayaa sheegay in Cidammada dowladda Kenya ay kaalin wayn ka qaadato ammaanka qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya.
Ban Ki Moon oo maanta kulan la yeeshay Madaxweynaha waddanka Kenya ayaa ammaanay howlgallada Ciidammadiisu ay ka wadaan Soomaaliya, isagoo tilmaamay in loo baahanyahay in lasii dar dar galiyo howlgalladaasi si ay ugu guulaystaan kooxda Al Shabaab ee dagaalada kula jirta Ciidamada Midowga Afrika AMISOM iyo kuwa dowlada KMG Soomaaliya.
Madaxweynaha dowladda Kenya Mow Kipaki ayaa sheegay in Ciidamada Militariga Kenya ay ka go’antahay sidii ay nabad ugu soo dabaali lahaayeen dalka Soomaaliya oo muddo ka badan 20-sano ay aafeeyeen dagaalada sokeeye, isago xusay in Ciidamadooda ay kalin ka qaateen howlgallada ka socda Koofurta Soomaaliya.
Ciidamada Kenya ayaa gudaha u soo galay Soomaaliya, iyagoo ka duulaya dhibaatooyin laga gaystay dalkoodu, waxaana ay sheegeen inay ka hortagaayaan Kooxda Al Shabaab oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeyso falalka guracan ee ka dhaca dalkaasi,..
Previous articleIbraahin Dhagaweyne oo ka hadlay Xiisadda colaadeed ee ka taagan deegaannada Buuhoodle
Next articleGuddoomiayah Urur-siyaasadeeda Ummad Dr. Gabboose oo lagu soo dhaweeyay magaalada Berbera.Video